by Anuj Bhai September 04, 2020
कुनै पनि नयाँ कुराको आविष्कार विशेष परिस्थिति र परिआएको चुनौतीले नै श्रृजना गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा धेरै विज्ञहरुको भनाई होे र सत्यता पनि त्यहि नै हो । आज हामी कोभिड १९ को चपेटाबाट गुज्रिरहेका छौं । मानिसहरु धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यतिबेला धेरै मानिसहरु ठूलो बिचल्लीमा परिरहेका छन् । यतिसम्म कि दैनिक ज्यलादारी, मजदुरी गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका व्यक्तिहरु सडकमा आईरहेका छन् । भोकमारीको मारमा परिरहेका छन् ।
यि र यस्तै सामाजिक पृष्ठभुमिहरु हेर्दा, नेपालको यतिबेलाको यो अवस्था देख्दा मानिसहरु अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँच्नको लागि नयाँ–नयाँ रणनीतिहरु, नयाँ चिजहरु, नयाँ कामहरुको खोजी तथा उत्खननमा लागिरहेको र नयाँ विकल्पहरुको खोजिमा लागिरहेका देखिन्छ । त्यसैले म हरेक नयाँ परिस्थितिले नयाँनयाँ विकल्पहरु ल्याउँछ र विकल्पले नै नयाँ चिजको सुरुवात गर्दछ भन्ने गर्दछु ।
आज विश्वमा ठूलठूला बिलिनियर कम्पनिहरु हामीले देखिरहेका छौं । ति कम्पनिहरु पनि यस्तै आईलागेका विभिन्न परिस्थितिले नै श्रृजना गरेको हुन् सायद । जस्तै, माईक्रोसफ्टले किन नयाँ सफ्टवेयर बजारमा ल्यायो त ? सायद त्यो कुनै समय र परिस्थितिले नै निम्त्याएको होला । र आज मानव जीवनमा यति धेरै सहजता ल्याएको छ । आज फेसबुक सामाजिक सञ्जाल विश्वमा किन यति धेरै व्यापक उपयोग भईरहेको छ ? सायद त्यहाँ पनि कुनै समस्या थियो होला र त मार्क जुकरवर्ग ले फेसबुकको उत्पत्ति गर्‍यो ।
ठिक त्यसैगरी आज कोभिड १९को कारणले गर्दा अनलाईनबाट पनि मिटिङ्ग हुन सक्छ र ? अनलाईनबाट पनि भेटघाट हुन सक्छ र ? काम हुन सक्छ र ? भन्ने मानसिकताबाट हामीलाई मुक्त गराएको छ । सायद कहिल्यै जूमको नाम नसुनेको मानिसले पनि आज जूम मार्फत मिटिङ्गहरु गराईरहेका छन् । कहिल्यै जूमको उपयोग नगरेका व्यक्तिहरुले आज जूम(Zoom) मार्फत जबरजस्ती अनलाईनमा काम गरिरहेका छन् । “वर्क एट होम / Work At Home ” घरमै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ र ? भन्ने कुराहरुमा लकडाउनले गर्दा आज धेरै मानिस चिरीएका छन् । या भनौं नयाँ–नयाँ विकल्पहरु जन्मिरहेका छन् ।
मैले सन् २००९ बाट नै अनलाईनबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने सुन्दै आएपनि लगभग २०१६ बाट मात्रै काम गरें । काम गर्नु संगसंगै आफ्नो अनुभूतिहरु यहाँहरुसंग साट्दै पनि आएको छु । यसै क्रममा मैले “Anuj Bhai Dot Com” प्रोगाम मार्फत धेरैलाई अनलाईनमा काम गर्न सिकाउने मौका पनि पाएँ । त्यसमा कति अगाडि बढ्दै जानुभयो कति अघि बढ्न सक्नुभएन त्यो आफ्नो ठाउँमै होला । तर ईन्टरनेटबाट पनि काम गर्न सकिन्छ है भन्ने कुराको शिक्षालाई अगाडि सार्ने मेरो प्रयासमा यहाँहरु धेरैले सपोर्ट र साथ दिदै आउनुभएको छ । त्यसकोलगि म यहाँहरुप्रति सधैं आभारी रहनेछु ।
यदि तपाईंहरुमा पनि यो लकडाउनको समयमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा दोधारको अवस्था छ भने ईन्टरनेटको सदुपयोग गरेर अनुजभाई डट कमले दिंदै आईरहेको निक्कै सम्भावना बोकेको निःशुल्क टे«निङ्गहरुको (Free Training) बारेमा बुझेर काम गर्नसक्नुहुनेछ । तपाईं चाहे, Freelancer भएर काम गर्नुहोस्, सोसल मिडिया मार्केटिङ्ग एजेन्सि भएर काम गर्नुहोस् , एफिलेड भएर काम गर्नुहोस् वा ई कमर्शमा काम गर्नुहोस् । र यो सबैको बारेमा के हो त भनेर विस्तृत रुपमा बुझेर, परामर्श लिएर तपाईंपनि आफु सुहाउँदो काम गर्दै अघि बढ्न सक्नुहुनेछ ।
विस्तृत जानकारीको लागि मैले भिडियो मार्फतपनि जानकारी दिंदै आएको छु । र यो ब्लग पोष्टमा रहेको भिडियो मार्फतपनि जानकारी लिनसक्नुहुन्छ । र तपाईंपनि यो परिस्थितिमा नयाँ विकल्पको रुपमा ईन्टरनेटको प्रयोग गरेर आजैबाट काम सुरु गर्नुहोस् । आशा गर्छु, तपाईंले यो ब्लगमार्फत् नयाँ उत्साह पाउनुभएको छ ।
Tags: Anuj Bhai Blog, best business in nepal, business idea in nepal, business nepal, earn money online in nepal, good business in nepal, how to start online business in nepal, Internet Marketing, Internet Marketing In Nepal, Nepalese Internet Marketer Story, small capital business in nepal, top 10 business in nepal
Question/ what is online marketing??
Ans; someone company’s products and services saleing by throw using internet explorer sociol media.this is online online marketing..
I want to free of course please.